Vaky vava amin’ny ataon’i Simao ny Sadc ary milaza handray andraikitra, hoy ny filoha Ravalomanana.	Niditra mivantana tetsy amin’ny kianjan’ny Magro, io tolakandro io ny filoha Ravalomanana, inty entinay aminao ity ny dika teny malalaka nataony tamin’izany :
Tsy hamela ny Filoha Ravalomanana hody irery an-Tanindrazana ny vondrona SADC ! Fihaonamben’ny Firaisamonimpirenena : handray andraikitra fa mijaly ny vahoaka ! Miantso ny Tafika handray andraikitra ihany koa ny Pr Zafy Albert Auteur Solo Razafy*Publié le 17 août 201117 août 2011Catégories Politique	9 pensées sur “Vaky vava amin’ny ataon’i Simao ny Sadc ary milaza handray andraikitra, hoy ny filoha Ravalomanana.”	tsimisorona dit :	17 août 2011 à 19 h 30 min	MILA HANTSOIN NY SADC HO ANY LUANDA I SAMAO fipetrahan ny FRANTSAY .
randria dit :	17 août 2011 à 21 h 59 min	Dia tena manalika mihintsy anie ratalonety sarko sy simao e!
Bemafohy dit :	17 août 2011 à 23 h 10 min	Hitako iny film documentaire iny Randria a!Romotra mihintsy izaho sy ny vadiko nahita an’iny.Ireo miaraka amin-dry zareo « mpanaotrano » koa no tena loza koa.Tena vongany mihintsy ilay TGVendrana raha ireny no fandehany.I norbera lala moa tsy lazaiko intsony.Amboary ny sambon’i bolloré e!
HoAiza dit :	17 août 2011 à 23 h 10 min	Marina ny voalazanareo roa lahy ê!
nandrason dit :	18 août 2011 à 18 h 00 min	Fa inona ihany no tena tadiavy n’i ra8. Tsy mitsahatra mandainga! Tsy nivarotra an’ny daewoo aho, ny avion, tsy ho ahy irery, izao tsy namono olona!
lalah dit :	18 août 2011 à 19 h 08 min	nandra , nandra ,vokisany foza vola maloto de na manitsa tay aza tsy mahare maimbo , fa ina mihitsy no tsy haritrareo @ ra8 e ! olona tsy ao antoerana , no enjehina lava sy tsikeraina , hita mitsy hoe matahotra , ra hendry ny djkelinao tsy zay atavoaka ny baolina atao , fa lany andro manaratsy andra8 eo , izy ary mampande tsara ny orinasany any ivelany , ianareo ao faly mandripaka ny bois de rose hampidiram bola , hahaha ! diavolan kolava , lalao mbola ho ela , izay ray maharitra hatr@ farany ,ty tena nandra mitsy
ranavalona dit :	18 août 2011 à 20 h 50 min	Ary nitombo 100 indray ilay 50 ry nandra a!f’angaha tsy olona dimapolo indray sisa eo @ Magro?
Babyfoot dit :	19 août 2011 à 14 h 47 min	Nandrason nanova pseudo fa ilay iray iany io !!!
bodelkalisy dit :	2 octobre 2014 à 9 h 52 min	Sarotra aloha ny hino ireo sadc reo fa efa ela zay,SAROTRA HOA REFA TSY AU POUVOIR
Précédent Article précédent : Document préparé par la Mouvance Ravalomanana pour le sommet de LuandaSuivant Article suivant : Mampisavorovoro ny saim-bahoaka i Simao !